Search လိုးကားများသီးသန့် myanmar movies 2017 - BajarFB.com
Search Results - လိုးကားများသီးသန့် myanmar movies 2017
Myanmar Movies - မမနေဲ့နျော (ကြျောဟိနျး၊ထိနျးအိန်ဒွာဗို)
Myanmar Movies - မမနေဲ့နျော (ကြျောဟိနျး၊ထိနျးအိန်ဒွာဗို) ကျွန်တော်ကြိုက်သောသီချင်းလေးများ 8 Oct 2020 · 5K views
Dragon Hunter (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး ဂူကျင်းကျောင်းတော်ကြီးအောက်မှာ လျို့ဝှက်စွာသိမ်းထားတဲ့ အနက်ရောင်တောင်ဝှေးတစ်ချောင်း…မြွေနက်မလေးတစ်ကောင်က မှားယွင်းမြိုချမိပြီး နဂါးမိစ္ဆာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ…ကျားမိစ္ဆာတစ်ကောင်သောင်းကျန်းနေလို့ နှိမ်နင်းဖို့မွေးရာပါ ကျားအမှတ်အသားပါတဲ့ ဆရာတက်ရ်ှဆိုတဲ့ကျားနိုင်ဆရာကို သွားရှာဖို့ ဂူကျင်းကျောင်းတော်က ဘုန်းကြီးကယ်တစ်ပါးကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတယ်ထိုဘုန်းကြီးကယ်မှာ မွေးရာပါ နဂါးနိုင်အမှတ်အသားပါလာပြန်ပြီး နဂါးမိစ္ဆာကိုနှိမ်နင်းဖို့ ပါရမီပါနေသူဖြစ်နေပြန်ပါတယ်.. နဂါးမ မြိုချထားတဲ့ အနက်ရောင်တောင်ဝှေးဆီက အစွမ်းတွေရချင်နေတဲ့ မိစ္ဆာကြီးဟာ ဆရာယောင်ဆောင်ပြီး သူ လက်သပ်မွေးထားတဲ့ တပည့်မလေးကို..နဂါးအမှတ်အသားပါတဲ့ ဘုန်းကြီးလေး ရှူရှင်ကို သိမ်းသွင်းခိုင်းဖို့ကြိုးခိုင်တဲ့အခါမှာ..ကျားနိုင်သူရဲကောင်း ဆရာတက်ရှ် ကိုရော..ရှာတွေ့မှာလား.??နဂါးမိစ္ဆာကြီးကိုရော နှိမ်နင်းနိုင်မှာလား??တပည့် မြေခွေးမလေးကိုရော သူ့ဆရာ မိစ္ဆာကြီးရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလား??အားလုံးသော တာဝန်တွေဟာ ဘုန်းတော်ကြီးရှူရှင် အပေါ်ကျရောက်လာပါတော့တယ်……(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ အောင်ချမ်းငြိမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်)File Size : 700 MB/270MB Quality : WEB DL 720P Running Time : 1hr 20minutes Format : Mp4 Genre : Fantasy Action Comedy Translator : Aung Chan Nyein Encoder :Thanhtike Zaw
Dragon Hunter (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး ဂူကျင်းကျောင်းတော်ကြီးအောက်မှာ လျို့ဝှက်စွာသိမ်းထားတဲ့ အနက်ရောင်တောင်ဝှေးတစ်ချောင်း…မြွေနက်မလေးတစ်ကောင်က မှားယွင်းမြိုချမိပြီး နဂါးမိစ္ဆာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ…ကျားမိစ္ဆာတစ်ကောင်သောင်းကျန်းနေလို့ နှိမ်နင်းဖို့မွေးရာပါ ကျားအမှတ်အသားပါတဲ့ ဆရာတက်ရ်ှဆိုတဲ့ကျားနိုင်ဆရာကို သွားရှာဖို့ ဂူကျင်းကျောင်းတော်က ဘုန်းကြီးကယ်တစ်ပါးကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတယ်ထိုဘုန်းကြီးကယ်မှာ မွေးရာပါ နဂါးနိုင်အမှတ်အသားပါလာပြန်ပြီး နဂါးမိစ္ဆာကိုနှိမ်နင်းဖို့ ပါရမီပါနေသူဖြစ်နေပြန်ပါတယ်.. နဂါးမ မြိုချထားတဲ့ အနက်ရောင်တောင်ဝှေးဆီက အစွမ်းတွေရချင်နေတဲ့ မိစ္ဆာကြီးဟာ ဆရာယောင်ဆောင်ပြီး သူ လက်သပ်မွေးထားတဲ့ တပည့်မလေးကို..နဂါးအမှတ်အသားပါတဲ့ ဘုန်းကြီးလေး ရှူရှင်ကို သိမ်းသွင်းခိုင်းဖို့ကြိုးခိုင်တဲ့အခါမှာ..ကျားနိုင်သူရဲကောင်း ဆရာတက်ရှ် ကိုရော..ရှာတွေ့မှာလား.??နဂါးမိစ္ဆာကြီးကိုရော နှိမ်နင်းနိုင်မှာလား??တပည့် မြေခွေးမလေးကိုရော သူ့ဆရာ မိစ္ဆာကြီးရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလား??အားလုံးသော တာဝန်တွေဟာ ဘုန်းတော်ကြီးရှူရှင် အပေါ်ကျရောက်လာပါတော့တယ်……(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ အောင်ချမ်းငြိမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်)File Size : 700 MB/270MB Quality : WEB DL 720P Running Time : 1hr 20minutes Format : Mp4 Genre : Fantasy Action Comedy Translator : Aung Chan Nyein Encoder :Thanhtike Zaw Shwe Myanmar Channel 12 Jun 2017 · 114K views
Namiya (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး ========= ဒီဇာတ်ကားကောင်းလေးကတော့ နာမည်ကြီးဂျပန်ဝတ္တုတပုဒ်ကိုအခြေခံထားပြီး ဂျပန်ဇာတ်ကားအနေနဲ့ ထွက်ရှိတုန်းကလဲ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်တရုတ်ဗားရှင်းမှာတော့ မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်းက ဆိုင်ရှင်အနေနဲ့ ပါဝင်လာပြီး တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်များကော ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်များတဲ့ပါ မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Box office ကတော့ $35Million(¥244.7Million)ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ကီချန်းဟာဒီကားမှာလဲ အသက်ကြီးကြီး ဆိုင်ရှင်အဘိုးကြီး ဇာတ်ကောင်နဲ့ သူ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ချီးကျူးခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တုန်းက နာမီယာစတိုးဆိုင်လို့လူတွေခေါ်ကြတဲ့ စတိုးဆိုင်လေးမှာ ဆိုင်ရှင်အဘိုးကြီးက စာရေးပြီးအကြံအဥာဏ်တောင်းတဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို စာပြန်ပြီးအကြံအဥာဏ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါတယ်..သူရဲ့ အချိန်တွေကိုတခြားလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံအဥာဏ်တွေပေးပြီးနေထိုင်နေရင်း တစ်နေ့မှာတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်.... ဒါပေမယ့် သူသေဆုံးပြီးလို့ နောက် ၂၅ နှစ်ကြာရင် ဒီဆိုင်ကိုညသန်းခေါင်ကနေ မနက်အထိပြန်ဖွင့်မယ်လို့ ကြေညာပေးဖို့ သူအယုံကြည်ရဆုံးသူကိုမှာထားခဲ့ပါတယ်.... နောင် ၂၅ နှစ်၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးတညမှာ လူငယ်လေးသုံးယောက် အမှတ်မထင် အဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်မိရာကနေ.... ၁၉၉၃ ခုနှစ်က စာတွေရောက်လာပြီး ထူးဆန်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကြားအပြန်အလှန်စာဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်.... အကောင်းဆုံးအကြံအဥာဏ်တွေကြိုးစားပေးကြရင်း သူတို့အားလုံးရဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေသိရှိလာတဲ့အခါမှာ.... ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပေးပို့တဲ့စာကိုလဲ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာရှိနေတဲ့ မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်းဆီက ပြန်စာရောက်လာတဲ့အခါမှာ... ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ... ၁၉၉၃ ခုနှစ်က လူနေမှုပုံစံတွေ... အတွေးအခေါ်တွေ.... လူငယ်တွေရဲ့ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေနဲ့.... ဖျော်ဖြေမှုရသပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.... #GoldChannel
Namiya (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး ========= ဒီဇာတ်ကားကောင်းလေးကတော့ နာမည်ကြီးဂျပန်ဝတ္တုတပုဒ်ကိုအခြေခံထားပြီး ဂျပန်ဇာတ်ကားအနေနဲ့ ထွက်ရှိတုန်းကလဲ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်တရုတ်ဗားရှင်းမှာတော့ မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်းက ဆိုင်ရှင်အနေနဲ့ ပါဝင်လာပြီး တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်များကော ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်များတဲ့ပါ မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Box office ကတော့ $35Million(¥244.7Million)ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ကီချန်းဟာဒီကားမှာလဲ အသက်ကြီးကြီး ဆိုင်ရှင်အဘိုးကြီး ဇာတ်ကောင်နဲ့ သူ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ချီးကျူးခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တုန်းက နာမီယာစတိုးဆိုင်လို့လူတွေခေါ်ကြတဲ့ စတိုးဆိုင်လေးမှာ ဆိုင်ရှင်အဘိုးကြီးက စာရေးပြီးအကြံအဥာဏ်တောင်းတဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို စာပြန်ပြီးအကြံအဥာဏ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါတယ်..သူရဲ့ အချိန်တွေကိုတခြားလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံအဥာဏ်တွေပေးပြီးနေထိုင်နေရင်း တစ်နေ့မှာတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်.... ဒါပေမယ့် သူသေဆုံးပြီးလို့ နောက် ၂၅ နှစ်ကြာရင် ဒီဆိုင်ကိုညသန်းခေါင်ကနေ မနက်အထိပြန်ဖွင့်မယ်လို့ ကြေညာပေးဖို့ သူအယုံကြည်ရဆုံးသူကိုမှာထားခဲ့ပါတယ်.... နောင် ၂၅ နှစ်၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးတညမှာ လူငယ်လေးသုံးယောက် အမှတ်မထင် အဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်မိရာကနေ.... ၁၉၉၃ ခုနှစ်က စာတွေရောက်လာပြီး ထူးဆန်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကြားအပြန်အလှန်စာဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်.... အကောင်းဆုံးအကြံအဥာဏ်တွေကြိုးစားပေးကြရင်း သူတို့အားလုံးရဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေသိရှိလာတဲ့အခါမှာ.... ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပေးပို့တဲ့စာကိုလဲ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာရှိနေတဲ့ မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်းဆီက ပြန်စာရောက်လာတဲ့အခါမှာ... ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ... ၁၉၉၃ ခုနှစ်က လူနေမှုပုံစံတွေ... အတွေးအခေါ်တွေ.... လူငယ်တွေရဲ့ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေနဲ့.... ဖျော်ဖြေမှုရသပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.... #GoldChannel We love Dilireba - Myanmar fan 14 Jul 2018 · 190K views
COVID ကာလတွက် ကျော်စိန်ဒကားလေးပါ Myanmar Movies - မမနေဲ့နျော (ကြျောဟိနျး၊ထိနျးအိန်ဒွာဗို)
Myanmar Movies - မမနေဲ့နျော (ကြျောဟိနျး၊ထိနျးအိန်ဒွာဗို) ကျွန်တော်ကြိုက်သောသီချင်းလေးများ 8 Oct 2020 · 4.4K views